Ha’yadda Amnesty International oo walac ka Muujisay in Dil Lagu Xukumay wiil13 jir ah oo mudaharaad ka qaybgalay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ha’yadda Amnesty International oo walac ka Muujisay in Dil Lagu Xukumay...
Ha’yadda Amnesty International oo walac ka Muujisay in Dil Lagu Xukumay wiil13 jir ah oo mudaharaad ka qaybgalay
Ha’yadda Amnesty International waxay ugu baaqday dowladda Sucuudiga inay meesha ka saarto xukunka dilka ah ee ka dhanka ah wiilkan yar oo la xiray xilli uu ka qeyb qaadanayay dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda Sucuudiga.
Muuqaal ay baahisay CNN ayaa muujinayay Murtaja Kureyris oo dibadbaxyada kaga qeyb qaadanayay baskiil, isaga oo kamid ahaa dhalinyaro isu soo baxday sannadkii 2011-kii oo ka dhacay gobolka Shiicada ee ku yaalla bariga dalkaas.
Amnesty waxay xaqiijisay in xafiiska dacwad oogaha guud ee Sucuudiga uu codsaday in xukun dil ah lagu rido Murtaja Kureyris bishii Agosto ee sannadkii lasoo dhaafay, waxaana loo heystaa dambiyo uu galay markii uu yaraa.
Kureyris oo hadda jiro da’da 18, waxaa xabsiga loo taxaabay bishii September ee sannadkii 2014-kii, waxaana lagu xiray xabsiga carruurta ee ku yaalla magaalada Dammaam.
Waxaa uu ku jiray xabsi gaar ah, waxaa uu la kulmay tacaddiyo isugu jiro garaac iyo handdadaad markii saraakiisha xabsiga ay su’aalaha weydinayeen.
Amnesty waxay sidoo kale sheegtay in saraakiisha xabsiga ay u ballan qaadeen inay sii deyn doonaan, haddii uu qirto dambiyada lagusoo eedeeyay, balse bishii May ee sannadkii 2017-kii, waxaa loo wareejiyay xabsiga Mabaceth ee ku yaalla magaalada Dammaam, waxaa uu jiray markaas 16 sano.
Amnesty waxay sheegtay in Kureyris loo diiday inuu helo qareenno u doodo; markii ugu horreysay waxaa dacwaddiisa la dhageystay bishii Agosto ee sannadkii 2018-kii.
Waxaa dacwaddiisa gacanta ku heysay maxkamad gaar ah oo dhageysata kiisaska argagixisada la xiriira iyo dibadbaxyada oo la sameeyay 2008-kii.
Warbixinta Amnesty waxaa sidoo kale lagu sheegay in dambiyada loo heysto Murtaja Kureyris ay ka mid yihiin, ka qeyb qaadashada bannaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda Sucuudiga iyo inuu ka qeyb qaatay munaasab lagu aasayay walaalkiis, Cali Kureyris oo lagu dilay dibadbaxyo sannadkii 2011-kii ka dhacay Sucuudiga.
Waxaa sidoo kale la sheegay in reer Kureyris ay ku eedeysan yihiin weerarka saldhig boolis.
Previous articleXisbiyadda Kulmiye Iyo Ucid Ma Buuxin Karaa Booskii Uu Baneeyay Xildhibaan Cali Aareye+Muxuu Sharcigu Ka Qabaa
Next articleRoobabkii Hargaysa Ka Da’ay Khasaarihii Ay Gaysteen Inteebuu Marayaa